Akụkọ - Industrylọ ọrụ na - agbanwe agbanwe - E-azụmaahịa, usoro mmepe azụmaahịa ọhụụ
Na Jenụwarị 22, Mịnịsta nke Mịnịstrị na-ekwu maka mmepe nke ahịa mkpọsa n'ịntanetị na 2020, na-ekwu na n'ime afọ gara aga, mmepe nke ụlọ ahịa na-ere ahịa n'ịntanetị gosipụtara omume dị mma, na nha ahịa ahụ ruru oke ọhụụ ọhụrụ. larịị. N'ime afọ 2020 dum, atụmatụ nke ahịa azụmaahịa ndị China dị ka ndị a: agbanweela ụdị azụmaahịa azụmaahịa ochie na nke ọhụrụ, na ike nkwalite oriri adịghị agwụ agwụ; E-commerce na-agafe ókèala na-aga n'ihu ịkwalite mmepe nke azụmahịa mba ụwa; E-commerce ime obodo emegogo, na mmepe nke e-commerce ime obodo abawanye.
A na-akọ na na 2020, usoro nyocha e-commerce nke China na-achịkọta ihe karịrị 24 nde ndụ ahịa, ahịa agụmakwụkwọ n'ịntanetị amụbawo karịa 140% na-atụle na afọ gara aga, na nyocha ahụike gbasara ntanetị amụbawo site na 73.4% afọ na Afọ. Ọzọkwa, nnukwu nkwalite ịzụ ahịa n'ịntanetị dị ka "Ememme Doublezụ ahịa Abụọ", "618 ″," Double 11 'na na-aga n'ihu "Online Spring Festival Shopping Festival" akwalitela ntọhapụ nke ọchịchọ ma mekwaa ka ahịa ahịa too ike . Oriri nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ahụike, "ọnọdụ ụlọ" na "akụnụba ụlọ" abụrụla ihe a ma ama, yana uto nke akụrụngwa mgbatị ahụ, nri siri ike, disinfection na ngwaahịa ọcha, ihe ọkụkụ etiti na nke kichin na ngwa ahịa anụ ụlọ agafewo. 30%.
Dabere na ọnụ ọgụgụ ndị kọstọm, mbubata na mbupụ China nke oke-e-commerce ga-eru 1.69 puku ijeri RMB na 2020, mmụba nke 31.1%. Mmekọrịta China na mba 22 na azụmahịa e-commerce nke Silk Road emikwuola, na mmejuputa nsonaazụ nke mmekọrịta mba ọzọ agbalitela. 46 agbakwunyere ókè-ala e-azụmahịa saa mbara ikpe ikpe agbakwunyere, na "9710 ″ na" 9810 ″ cross-border e-commerce B2B mbupụ ụdị azụmahịa agbakwunyere iji kwado omenala nwechapụ.
N'ihe banyere ime e-commerce ime obodo, ire ere ire ere na ime obodo ruru 1,79 trillion yuan na 2020, afọ 8.9% n'afọ. E-commerce emeela ngwa ngwa na mmepe dijitalụ nke na-enyere ọrụ ugbo aka, na usoro ihe ọkụkụ nke emegharịrị na ahịa e-commerce na-aga n'ihu na-ere nke ọma, na-enye nnukwu mmụba na mweghachi ime obodo na mbelata ịda ogbenye. Dika data nke National Bureau of Statistics weputara, ire ahia ntaneti nke China na 2020 ga erute puku ijeri yuan 11.76, ihe ruru 10.9% kwa afo, na ire ahia ntaneti nke ngwa ahia ga erute 9.76 trillion yuan, elu 14.8% kwa afo. , na-akwụ ụgwọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ire ere ahịa nke ngwaahịa.
Ihe data na-egosi na ụlọ ahịa na ntanetị na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịkwalite oriri, na-eme ka azụmahịa mba ọzọ na-aga n'ihu, na-agbasawanye ọrụ ma na-achọpụta ihe ndị mmadụ na-eme, na-eme ka ndụ dị ọhụrụ dị mkpa maka usoro mmepe nke usoro ụlọ bụ isi ahụ na usoro ụlọ na nke mba. na-akwado ibe ha.